ओसामा बिन लादेनका छोरा मारिए, १० लाख डलर राखिएको थियो टाउकोको मूल्य, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
काठमाडौं। आतंकवादी संगठन अलकायदाका तत्कालीन प्रमुख ओसामा बिन लादेनका छोरा हमजा बिन लादेन मारिएका छन् । अमेरिकी मिडियाले अमेरिकी अधिकारीको हवाला दिँदै यो जानकारी दिएको हो । पिताको मृत्यु भएपछि हमजा अल कायदाका प्रमुख बनेका थिए । यही वर्षको अप्रिलमा अमेरिकाले हमजाको जानकारी दिनेलाई १० लाख डलर पुरस्कार दिने घोषणा गरेको थियो ।
ओसामा बिन लादेनलाई २ मे २०११ मा पाकिस्तानको एबटाबादमा अमेरिकी सील कमाण्डोले मारेको थियो । लादेनको जन्म १९५७ मा साउदी अरबको रियाधमा भएको थियो । १९७९ मा सोभियत संघले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्दा लादेन अफगानी प्रतिरोधी समूहमा सहभागी भए । सोभियत फर्किएपछि लादेनले अल कायदा नेटवर्क गठन गरे । २००१ सेप्टेम्बर ११ मा अमेरिकामा भएको आक्रमण लादेनकै नेतृत्वमा भएको थियो । हमजाले यही आक्रमणमा सक्रिय आतंकवादी मुहम्मद अट्टाकी छोरीसँग बिहे गरेका थिए । पिताको मृत्युपछि उनले अल कायदाको नेतृत्व सम्हालेका थिए र उनी पिताको हत्याको बदला लिन चाहन्थे ।